Impilo yansuku zonke umuntu ngamunye ayikwazi wacabanga ngaphandle kokudla. Yingakho kusukela abathengi ngokuvamile kakhulu ukwazi, futhi uma kukhona amanye amaqiniso athakazelisayo mayelana ukudla futhi wenze iziphuzo ukuthi Ushintsha isithombe umkhiqizo. Yebo zikhona. On azishiye uyoboniswa okuxoxwe ngazo kulesi sihloko.
Kazi mayelana ice cream
Mhlawumbe emhlabeni kukhona abantu abambalwa abangathandi ice cream. Lokhu uswidi - umkhiqizo esihlwabusayo hhayi kuphela, kodwa futhi eyigugu kakhulu ngoba kusiza liphole ukushisa kwehlobo. Ngokwezibalo, ngomzuzwana emhlabeni wonke washisa mayelana 100 Kilos ice cream of izinhlobo ezahlukene nezinhlobonhlobo.
Amaqiniso ethakazelisayo ukudla, ikakhulukazi eqandisiwe, kufanele amtshele kusukela iphuzu Ngenxa Guinness World Records. Ngakho, Mirco Della Vecchia, ezidumile emhlabeni wonke eyaletha uphondo eliphakeme. Esilucwecwana inkomishi Ukuphakama kwawo bekuziikubhite 3 m. Isisindo amaswidi siphelile safinyelela 70 kg.
Okunye amaqiniso ethakazelisayo ukudla, kuhlanganise u-ice cream futhi ungakwazi ukutshela ngokuya izindleko ngalinye ekukhonzeni izibiliboco. Kuze kube manje, amanani esiphezulu esinqunywe ayisikhilimu - $ 1,000. Nambithani ingxenye ezibizayo ngakho kungaba endaweni yokudlela olulodwa e-New York, obizwa ngokuthi Serendipity. Ukuze ukudla ice cream kumakhasimende ethulwa ngesipuni igolide ehlotshiswe amadayimane, ukuthi ubani ingacosha njengesipho esivela sikhungo.
Lokhu dish hot like emazweni amaningi emhlabeni: Russia, e-Ukraine, Poland futhi Romania. Amaqiniso ethakazelisayo ukudla borscht kuyinto ilukuluku bangempela phezu ingxenye abasebenzisi Inthanethi. Lokhu kungenxa yokuthi ayikaziwa, osiqalo sakhe sisukela isidlo ozithandayo ngakho. Ukraine isobho weza kuphela XIV-XV eminyaka ke wangena ekudleni nsuku sabantu.
Kukholakala ukuthi ngo-2005 kugujwa iminyaka engu-300 kusukela ngaleso sikhathi, njengoba isobho yavela. Waqala ukupheka zokupheka ezihlukahlukene ngisho nangaphambi kwakukhona ulwazi mayelana amazambane notamatisi - izithako ezidingekayo ukuze lesi sidlo kuqala.
Akunakwenzeka ukuba zibone ngeso lengqondo amaqiniso ethakazelisayo ukudla ngaphandle kokukhuluma ukudla Japanese - sushi. Iqiniso lokuqala ezithakazelisayo ehlangene yokuthi eJapane ngo-sushi amadoda kuphela iqhaza. Siyini isizathu? Futhi iqiniso lokuthi abamele nengxenye enamandla lwesintu abe lokushisa lomzimba ngaphansana abesifazane. Njengoba wazi, ukunambitheka izinga sushi zingashintsha, uma kukhona ukwephulwa yokukhiqiza ubuchwepheshe, kufaka phakathi i-imfiva.
Ngo-1993 e-Japan kwaba irekhodi elisha ukulungiswa roll eside. Ubude ingaphezu 1 km. Ngokuhamba ekuwulungiseleleni baqashwe phezu kwabantu 600.
Amaqiniso ethakazelisayo ukudla esisiza ukuba sixoshe izinganekwane mayelana sushi. Ikakhulukazi, kufanele kuphawulwe ukuthi wasabi wakhonza e zokudlela - Kayisilutho ngaphandle ezivamile horseradish ezinemibala udayi kanye nezinongo.
Ezinye amaqiniso mayelana "Coca-Cola"
Eqokomisa amaqiniso ethakazelisayo ukudla "McDonald", kufanele unake okukhethekile isiphuzo oyintandokazi izivakashi eziningi isikhungo - "Coca-Cola". Ekuqaleni, lesi siphuzo wayengekho carbonated, futhi waba ngomunye ubuvila umdali eqinile - Willie Veneylba.
Ngolunye usuku ekuseni, + umuntu othile wasondela Will, ngubani wayehlushwa a Hangover, ukunikeza kuye ngomuthi. Apothecary yakhombisa ubuvila kakhulu ukuya empompini ukuba alulaze lo isiraphu futhi wanquma ukuxuba "Coca-Cola" soda eyayimi eduze ngokushesha. cocktail Imiphumela kakhulu. Ngemva kwesikhathi esithile, nomaphi isiphuzo ithengiswe "Coca-Cola" waqala ukugxambukela kuphela soda.
Kazi aphathelene nosawoti
I amaqiniso ethakazelisayo ukudla izingane kungafaka ukwaziswa okuthakazelisayo mayelana usawoti, ngoba uyazi ingane ngayinye. Sol - akuyona nje condiment, esetshenziselwa ukupheka, kodwa futhi umkhiqizo esisemqoka ekhaya. Njengoba legend has it, nezizwe, lapho kwakungekho ukunethezeka isidalwa, usawoti esetshenziswa ekuhlanzeni ezisanda kuzalwa. Le nqubo wabizwa ngokuthi "salting." Yithela lembuzi lo mkhiqizo, safuna ukunciphisa amathuba okuba nezifo, ukunciphisa umthelela kubo omoya ababi nasezifweni amademoni.
Salt bubaluleke esikhathini sethu, futhi ahlonishwe esikhathini esidlule. Ngokwesibonelo, eRoma yasendulo, njalo guest owangenela phezu kombundu wendlu, enika abambalwa seasonings. Leli qiniso labonakala kubhekwa uphawu ukwamukelwa, ubungani kanye nenhlonipho. Ngo enkathini ephakathi yomlando, lo mkhiqizo kwaba eqolo, eziningi kangaka ushintshe kuye izinto zenani elikhulu.
Kazi mayelana ushukela
Ngokusho izincwadi zomlando, umoba kwatholakala Alexander Omkhulu ngo-323 BC. Nokho, ukusebenzisa kwayo kuyi-Nguqulo Yezwe yaze yaqala ngekhulu xv, ngemva ukutholakala waseColumbus abadumile '. Ngo 1747, unyaka omusha iye titadishwe linothile ushukela - beetroot. Lokhu kuye kwabangela ukusatshalaliswa ezindawo ka okukhona ezindaweni ezisenyakatho, kanye nokwenyuka ezindaweni zokukhiqiza.
A Empeleni ukwazi mayelana ushukela ukuthi abantu base-Afrika kuze kube yilolu suku esisebenzisa njengophawu okukuvumela ukuthi ukubopha amanxeba. Ukuze wenze lokhu, abeke avale ushukela, okuyinto okufanele niwunikele magciwane nokulondoloza imihuzuko kanye nezimboni.
Ekuphetheni, kufanele kuphawulwe ukuthi lemali ushukela kule lemon izikhathi eziningana okuqukethwe izidakamizwa e-strawberry. Ngo-2001, isifundo wayethole izinhlayiya izibiliboco esikhaleni evulekile. Lona omunye angajwayelekile okutholwe yisayensi eyishumi yokuqala yekhulu xxi. Mayelana kwalokho, indlela enyantisayo izinto ngaphandle Zomhlaba, singakwazi kuphela ukuqagela, ngoba impendulo engokwesayensi namanje akukho.
Watermelon kuyinto berry noma izithelo - Loyo ngumbuto?
Umqondisi wefilimu uCatherine Bray. Ama-movie eseceleni kokuvinjelwa